China dzakachinjwa bhitumini isapinda Kamudzira dzaFord - China Xinle Hongtai Waterproof
Asphalt mvura Kamudzira michina
Aluminum zvemapuranga PET firimu
Bhitumini isapinda Kamudzira
China dzakachinja bhitumini isapinda Kamudzira productio ...
Modified Asphalt tara APP Waterproof Membrane For roa ...
Self namira Bituminous mvura Membrane / fla ...
China dzakachinjwa bhitumini isapinda Kamudzira dzaFord
Pashure-okutengesa Service Kunopiwa: Engineers iripo basa muchini mhiri kwemakungwa
Product zita: SBS / APP Asphalt isapinda Kamudzira
Kukwanisa: 3000-15000square mita / zuva
Garandi: 12 Months
Main Musangano: 90m * 12m * 8m
Compressed mhepo: 0.7Mpa, 0.6M3 / Maminitsi
Inforcement: polyester kana Washington City Offices
Maererano dzenyu zvinodiwa
Mazuva 90 pamusoro pakugamuchira dhipoziti
Modified bhitumini mvura Kamudzira iri zvinowanzoshandiswa maindasitiri uye vehurumende zvivako, zvakadai denga, bhesimendi, chimbudzi, zambuko, park, pool, mugero kuti isapinda uye moistureprof. Bhitumini chinhu yeHydrocarbon uye akasikwa wakasununguka kubva oiri ichakasangana nezvimwewo. Chinhu chinobatsira kabhoni chitoro uye asingauyi vaunze girinihausi magasi. Naizvozvo Kamudzira ndiyo inogona kuenderera nzira yokuchengeta kabhoni pamusoro pepasi.
The yose kushanda nhungamiro inogona kukamurwa 3 matanho.
1. Kuti kusanganisa kuti bhitumini, rabha upfu, talcum upfu, mafuta enginee uye vamwe mbishi zvinhu Via nokusanganisa Matangi (vaiitawo tangi inofanira kuchengetwa inodziya nokuda mafuta conduction) isu takanzwa pamurayiro rakapedzwa wemisanganiswa anganzi bituminous wemisanganiswa.
2. The bituminous wemisanganiswa achaparadzwa deliveryed kupinda unhani pools.Then pechingoro zvinhu (chisimbiso) vachaparadzwa zvemapuranga pamwe bituminous mixtures.At wokupedzisira Coated chisimbiso ichazadzwa Pe firimu kana jecha kana zvimwe materials.At iyoyo, bhitumini Kamudzira rokutanga dzichiumbwa.
3. The rakapedzwa zvigadzirwa achaparadzwa dzaserera nemvura mhepo, zvino radarika autowinder.
Apex chikamu ose chakanyatsorongwa yakazara kuti asakuvadza munguva chokufambisa.
Shipping: Tianjin chengarava
Q1: Unoshandisa yakati anotipa kuti mbishi zvinhu?
Chokwadi, tinogona kupa mbishi zvinhu kwamuri, zvisinei, vatengi edu anogona kutenga gondohwe zvinhu pamusika wavo.
Q2: rinhiko ndiko kushanda upenyu muchina wako?
The upenyu kushanda anopfuura 15 makore uye garandi 1 gore.
Q3: Chii basa rako rwokugadzirwa?
Isu achatuma mainjiniya vedu fekitari yedu mutengi kuti kugadzirisa michina kusvikira yedu
mutengi anogona kushanda navo.
Q4: Une vamwe mavhidhiyo apo tinogona kuona mutsetse zvibereko?
Chokwadi, tinogona kupa mamwe mavhidhiyo kuita vatengi dzedu akafara.
Previous: Self-namira Asphalt mvura Sheet Material kuti rusvingo isapinda
APP dzakachinja Bhitumini mvura
Asphalt mvura Membrane Equipment
Bhitumini Membrane berekai Line
Bhitumini Kamudzira Mukudhinda Line For Floor
SBS Modified Bituminous Bridge mvura
3mm 4mm Asphalt mvura zvinhu muchina ...
3mm 4mm 5mm SBS bitumen Waterproof Sheet Materi...
3mm 4mm Modified Bituminous mvura Sheet ...
3mm 4mm APP Bituminous isapinda / waterstop Mem ...